ရည်းစားအပစ်ခံရလို့ ဦးပိန်တံတားပေါ်မှခုန်ချသေဆုံး - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ရည်းစားအပစ်ခံရလို့ ဦးပိန်တံတားပေါ်မှခုန်ချသေဆုံး
ဦးပိန်တံတားပေါ် မှာ 4. 4.2017. 1:ခွဲ သူ့ရည်းစာအခြားယောက်ကျာ်းနောက်လိုက်သွားလို့၊ ပါလာတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကို တံတားပေါ်မှာဓာတ်ပုံ ရိုက်ပေးပါဆိုပီး တံတားတိုင်လုံးပေါ်ကနေ ဦးလေးကျွန်တော်သွားပီလို့ ပြောသွားပီးတော့ ကိုယ်တိုင်ခုန်ချသတ်သေသွားတယ် ဦးခေါင်း ကွဲသွားတယ် ပွဲချင်းပြီး
နောင်ချိုဘက်ကလို့ပြောတယ် အသက် ၂၄နှစ်
ဆေးစွဲခုန်ချ လိုက်တာလားလို့မေးတော့ ဦးလေးဖြစ်သူက ဆေးမသုံးဘူး အခုရက်ပိုင်းအတွင်းသူ့ကောင်မလေးလင်နောက်လိုက်သွားလို့ သူ့စိတ်တွေညစ်နေတာသိလို့ လိုက်ထိန်းနေရတာတဲ့ အရင်ရက်တွေကလည်း ဒုတ္ထဝတီ မြစ်ဘက်လည်းသွားခဲ့သေးတယ်တဲ့ သု့ပုံစံမူမမှန်လို့ လိုက်ထိန်းနေရင်း အခုလိုဖြစ်သွားတာလို့သူ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ပြောသွားတယ်။
Credit:Tin Tun Win
ဦးပိနျတံတားပျေါ မှာ 4. 4.2017. 1:ခှဲ သူ့ရညျးစာအခွားယောကျကြာျးနောကျလိုကျသှားလို့၊ ပါလာတဲ့ဦးလေးဖွဈသူကို တံတားပျေါမှာဓာတျပုံ ရိုကျပေးပါဆိုပီး တံတားတိုငျလုံးပျေါကနေ ဦးလေးကြှနျတျောသှားပီလို့ ပွောသှားပီးတော့ ကိုယျတိုငျခုနျခသြတျသသှေားတယျ ဦးခေါငျး ကှဲသှားတယျ ပှဲခငျြးပွီး
နောငျခြိုဘကျကလို့ပွောတယျ အသကျ ၂၄နှဈ
ဆေးစှဲခုနျခြ လိုကျတာလားလို့မေးတော့ ဦးလေးဖွဈသူက ဆေးမသုံးဘူး အခုရကျပိုငျးအတှငျးသူ့ကောငျမလေးလငျနောကျလိုကျသှားလို့ သူ့စိတျတှညေဈနတောသိလို့ လိုကျထိနျးနရေတာတဲ့ အရငျရကျတှကေလညျး ဒုတ်ထဝတီ မွဈဘကျလညျးသှားခဲ့သေးတယျတဲ့ သု့ပုံစံမူမမှနျလို့ လိုကျထိနျးနရေငျး အခုလိုဖွဈသှားတာလို့သူ့ဦးလေးကိုယျတိုငျပွောသှားတယျ။